09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	E-mail seller	Max Auto Car Co.,Ltd.	Certified dealer	Your name
Max Auto Car Co.,Ltd သည် Korea နိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့်သော ကားများကို တစ်လလျှင် အစီးရေ ၃၀ကျော် တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ကားများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း လိုအပ်ချက်မရှိအောင် စီစဉ်ပြီးမှ ဈေးကွက်တွင်းသို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှ အင်ဂျင်နှင့်ဂီယာဘောက်စ် ကို ၆လ (သို့) ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀ အာမခံပေးလျက် Customer များအား စိတ်ချမ်းသာအောင် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ လိုအပ်သော Korea ကားများ၏ Spare Parts မျိုးစုံကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။ Max Auto Car Co.,Ltd ရုံးချုပ်သည် Korea နိုင်ငံမှ ဖြစ်ပါသည်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်လည်း အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး တို့တွင် အရောင်းပြခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အရစ်ကျ ငွေပေးချေမှုဖြင့်လည်း ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ Ratings
There are no comments for Max Auto Car Co.,Ltd.! Be the first to comment!
09:30 - 16:30 Tuesday:
09:30 - 16:30 Thursday:
09:30 - 16:30 Saturday:
09:30 - 16:30 Services offered